Ukuphupha ngeTheatre Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ▷️
Ithiyetha inesiko elide kakhulu kuluntu lwethu. Kudala abantu babesonwatyiswa yimiboniso yalapho, kodwa babefundisiwe. Isenza igalelo elibalulekileyo kwinkcubeko yethu namhlanje.
Kodwa ukongeza kubaluleka bemidlalo yeqonga kubomi bokwenyani, kuyenzeka ukuba abantu baphuphe ngayo. Nokuba bakula maphupha njengabadlali eqongeni, okanye kubaphulaphuli njengababukeli. Ukutolikwa kwemidlalo yeqonga njengophawu lwephupha kwahluka kakhulu. Ukuze ulitolike ngokucacileyo, iimeko ezichanekileyo kunye nomxholo wephupha kufuneka zihlale ziqwalaselwa.
1 Uphawu lwephupha «indawo yokubonela» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «indawo yokubonela» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «indawo yokubonela» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «indawo yokubonela» - ukutolikwa ngokubanzi
Nabani na obona umdlalo ephupheni njengombukeli kufuneka enze oko ngokoluvo ngokubanzi njenge isilumkiso qonda. Ukuphupha kusongela ukuwela kwiinjongo zenkohliso kunye nenkohliso yabanye. Umntu okwisangqa sabahlobo bakho okanye oqhelene nabo unokuzama ukukungcatsha.
Ke ngoko, kuya kufuneka ulumke ungazivumeli ukuba uqhathwe okanye uhanjiswe kwicala ongafuni ukuya kulo. Ngaphandle koko, kukho umngcipheko wokulahleka kwemali. Kukwabalulekile ukujonga iimeko ezithile ngokuchanekileyo kwaye ungafumani ithemba lakho. Oku kunokukhokelela kusilelo.
Kwelinye icala, ukuba undwendwela umdlalo weqonga nabahlobo ephupheni, hlalani kunye kwindawo yemidlalo yeqonga, uphawu lulinganiswe kakuhle - iphupha likuloo meko themba abo bakungqongileyo. Imiba eyahlukeneyo yobomi bakho babucala nayo iya kuphuhla ngokweminqweno yakho kunye nemibono.
Ukuba ubukele umdlalo ohlekisayo kunye kwaye uhleka kakhulu, umntu ekubhekiswa kuye makazame ukungalahleki kwiinjongo zakhe, nokuba yonke into ihamba kakuhle ngalo mzuzu, ngenxa yoko akazonwabisi nje.
Rhoqo kukho amaphupha apho umntu ekuthethwa ngaye ethatha inxaxheba kumdlalo weqonga njengomdlali weqonga. Ngokutolikwa ngokubanzi, oku kuphakamisa ukuba uyomelezwa ngabanye, ngakumbi kubomi bokwenyani. iqatshelwe, mhlawumbi iyagwetywa. Amanyathelo akho ngamanyathelo aya kulandelwa ngokugxekayo ngamanye kwixesha elizayo. Ukongeza, ubunzima bunokuvela kwiindawo ezithile zobomi.
Uphawu lwephupha «indawo yokubonela» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo lwamaphupha, uphawu "yemidlalo yeqonga" lubaluleke ngokukodwa. Ithetha okuninzi ngobomi bakho, ukuba Umfanekiso wakho kunye nezimo zangaphakathi.
Ukuba umntu ekubhekiswa kuye ubukele umdlalo ephupheni, oku kunokuba luphawu lokuba akenzi ngokungxama nokungakhathali kubomi bokwenyani, kodwa ujonga iimeko ezahlukeneyo ngokusondeleyo kuqala, agwebe emva koko enze. Nangona kunjalo, kwangaxeshanye, uhlobo lwesiqwenga kufuneka siqwalaselwe, kunye nokuphendula kwakho ephupheni: Ezi zinto zinokunika ulwazi malunga nokuba lo mntu kuthethwa ngaye uziphatha ngokufanelekileyo kubomi bemihla ngemihla.
Nabani na odlala umdlalo ephupheni kufuneka ayithathe njengecebiso elivela kwi-subconscious yokuba kunokuba kuninzi ebomini bokwenyani. ulungeleleneiziphatha ngendlela echaphazelekayo okanye engathembekanga. Kubalulekile ukuba afunde apha ukuba abe soloko enguye.
Ukuba iphupha likwindawo embindini ngexesha lesiqwenga, oku kunokuba sisiboniso somnqweno wakho. Ingqwalaselo engakumbi ngokusebenzisa ummelwane. Ukuba, kwelinye icala, uphoswa ngumsebenzi, woyikisa ukulibala okanye ungayihoyi into ebalulekileyo kubomi bokwenyani. I-subconscious yakho ifuna ukutsala umdla wakho ngeli phupha.
Uphawu lwephupha «indawo yokubonela» - ukutolika kokomoya
Ngokwembono yokomoya, el mundo yokwenyani esihlala kuyo yimacrocosm. Iphupha malunga nendawo yemidlalo yeqonga ijika ibe ngokuchaseneyo nenye. Microcosm ifuzisela.